Deg Deg: Xildhibaan ka tirsan Golaha Shacabka oo goordhaw lagu dilay Muqdisho – Kalfadhi
Goor dhaw ayaa degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir lagu dilay Xildhibaan Cismaan Cilmi Boqorre, oo ka tirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaiya.
Allaha u naxariistee, Xildhubaan Boqorre waxa ay goobjoogayaal u sheegeen Kalfadhi in ay dileen koox ku hubeysneyd baastoolado, xili uu ku sugnaa hoygiisa, oo ku yaala nawaaxiga Xarunta Degmada Kaaraan fiidnimadan.
Lama ogaan ilaa iyo hadda cidda dishay iyo sababta dilkiisa, dowladduna wali kama soo saarin war rasmiya, waxaase inta badan dilalka nuucaan ah geysta Al-Shabaab ama Daacish. Balse, Maamulka Degmadu waxay sheegeen in ay qabteen gaari ay wateen ragga dilka geystay.
Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sh. Maxamuud iyo Shariif Sh. Axmed ayaa ka tacsiyeeyey geerida Xildhibaanka ee degdegga ah.
Xildhibaan Borre waxa uu Baarlamaanka Soomaaliya kasoo tirsanaa ilaa sanadkii 2000, isagoo mar soo ahaa Guddoomiye Kuxigeen 2-aad Golahii Shacabka – dowladdii lagu soo dhisay Kiinya, waxa uuna ahaa Xubin si firfircoon uga dhex muuqday Golaha.
Waxaa uu ahaa da’ cimrigiisa sartii uga noqday Guddoomiye Ku-meel-gaar ah Golaha Shacabka ee hadda intuusan dooran Guddoon, waayadii dambana aad ugama qeyb ahayn doodaha Golaha ee masrax joogsiga ah. Hadal jeedinadiusii ugu dambeeyey waxay u badnaayeen islaaxinta iyo dejinta mararka ay xiisado siyaasadeed ka dhex kacaan Golayaasha Dowladda.
Madaxweynaha Deni oo sheegay in agabka caalamku ugu talagalay ciidanka Soomaaliya aysan Puntland waxba ka soo gaarin